အချစ်ကြမ်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ရင်သားတွေ ပြုတ်ထွက်သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ
အချစ်ကြမ်းလွန်းတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ရင်သားတွေ ပြုတ်ထွက်သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဒေသခံ တီဗွီ အစီအစဉ် တစ်ခုမှာ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူမဟာ အခုအခါမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ရင်သား ပိုကြီးအောင် အစားထိုး ခွဲစိတ်မှု […]
နောက်ကွယ်မှာ ချစ်ဇာတ်လမ်းခင်းနေတဲ့ ဇနီးသည်ကို ငရုတ်သီးထိုးသွင်း လက်စားချေခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း များသောအားဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲ၊ လင်မယားတွေရဲ့ လမ်းခွဲရခြင်းအစက တစ်ဦးကတစ်ဦးအပေါ် မရိုးမသား လိမ်ညာဖုံးကွယ်ထားခြင်းကလို့ပဲဆိုရပါမယ် …။ လိမ်ညာတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူတစ်ပါးမထိခိုက်အောင် လိမ်ညာခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြစ်ကို ဖုံကွယ်ခြင်းဆိုပြီး ရှိတတ်ပါတယ်နော် …။ အဖြူရောင်မုသား (white […]
ရင်သားလှပချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်သားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပုံလုပ်နည်း
ရင်သားလှပချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်သားလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပုံလုပ်နည်း Dr.myanmar ပေ့က Video လေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်းပေးလိုက်ရ ပါတယ်နော် …။ ရင်သားလှပချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရင်သားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေး ကို တင်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ Instructor ကတော့ပရိတ်သတ်ကြီးများရဲ့ အချစ်တော် အေးမြတ်သူ ဖြစ်ပါတယ် …။ […]
ရွှေတောင်မြို့တွင် ရည်းစားကိုအလုပ်ထုတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်ရှင်အား ဓါးနဲ့ ဝင်ခုတ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ် သရက်တောရပ်ကွက်၊ တရားရုံးလမ်းထောင့်နှင့် ရန်ကုန်- ပြည်ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ယမန်နေ့က နေ့လည် ၁ နာရီခန့်က ဒါးခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါတယ် …။ ဒါးခုတ်ခံရသူ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဇေယျာညွန့်မှ ” […]
အွန်လိုင်းသုံစွဲသူတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် တရားသူကြီးမလေး သာမန်ခပ်ချောချော မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့ရင်တောင် ငေးကြည့်မိတဲ့ အမျိုးသားထုကြီးထဲမှာ အခုလို ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တရားသူကြီးဝတ်စုံနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ အမျိုးသားထုကြီး ဘယ်လောက်တောင် ဝန်ရံလိုက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့က တရားသူကြီး ဝတ်စုံကို ဝတ်ပြီး […]
ဆရာဝန်တွေတောင် အံ့သြခဲ့ရတဲ့ ခေါင်းသုံးလုံးပါတဲ့ ကလေးတစ်ဦးမွေးဖွား (ဗွီဒီယိုဖိုင်) ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယနိုငိငံ ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ ကျန်းမာရေးစင်တာမှာ ဆရာဝန်တွေကော မိသားစုတွေကိုပါ ထိတ်လန့်စေခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်…။အဲ့ဒီကလေးငယ်ကတော့ ခေါင်းသုံးလုံးနဲ့ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပါ …။ ကလေးငယ်ဟာ မိန်းခလေးဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူဟာ မီးဖွားနေချိန်မှာ […]
ချစ်သူဘဝမှာ အတူနေဖို့ တခါမှ မတောင်းဆိုလို့ ရိုးသားသူ ဆိုပြီး ကြည်နူးခဲ့သမျှ ၊ မင်္ဂလာဦးညမှာ အသိနောက်ကျ နောင်တရခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး… သတုိ့သားက လက်မထပ်ရသေးဘဲ အတူ မနေချင်ဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက အဲ့လို လူစားမျိုး မဟုတ်ပဲ သမာရိုးကျ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တဲ့သူ […]
သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ကောက်ရတာကို ပိုင်ရှင်အားပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးက taxiယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီ…. 22ရက်7လ2019 ညပိုင်းမှာမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တံတားဦးလေဆိပ်ကြီးမှာ ဧည့်သည်လာကြိုတဲ့ကားတစ်စီးမှ သိန်းရာကျော်ပါတဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ပြုတ်ကျနေတာကို မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ win လေဆိပ် taxiဂိတ်မှာကားပြေးဆွဲနေသော …. ယာဉ်မောင်းကိုကျော်စီမှကောက်ရကာ သက်ဆိုင်ရာwin လေဆိပ်ဂိတ်မှုးအားသွားအပ်ကာ ဂိတ်မှုးမှလဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်မှုးရုံးခန်းအား ထိုအိတ်အားသွားအပ်စဉ် အိတ်ကျရစ်သူများမှပြန်လည်လာရှာစဉ် တွေ့ပီးအိတ်အားပြန်လည်စစ်ဆေးပီးတော့ …. မှန်ကန်ကြောင်းပြောပြပီး ကောက်ရသူ […]
အဝေးကချစ်သူကို မိုင်(၁၅၀၀) ခရီးနှင်ပြီး၊ SURPRISE လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း….
အဝေးကချစ်သူကို မိုင်(၁၅၀၀) ခရီးနှင်ပြီး၊ SURPRISE လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း…. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိုင်းပေါင်း ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ Long-distance relationship ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအဖို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သစ္စာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်နေရရင်၊ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနီးလေးလို့ ခံစားရမှာပါ …. ။ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ […]